Psalmen 57 HTB - Nnwom 57 ASCB
Dawid dwom a ɔtooɛ ɛberɛ a ɔdwane firii Saulo nkyɛn kɔɔ ɔbodan no mu.
1Hu me mmɔbɔ, Ao Onyankopɔn, hunu me mmɔbɔ,
na wo mu na me kra nya dwanekɔbea.
Wo ntaban nwunu ase na mɛpɛ dwanekɔbea
kɔsi sɛ amanehunu no bɛtwam.
2Mesu frɛ Onyankopɔn, Ɔsorosoroni no;
3Ɔsoma firi soro hɔ bɛgye me nkwa,
ɔka wɔn a wɔtaa me anibereɛ so no anim;
Onyankopɔn soma ne dɔ ne ne nokorɛ.
4Agyata atwa me ho ahyia;
meda mmoa a wɔwe ɛnam mono mu,
nnipa a wɔn se te sɛ mpea ne mmɛmma
na wɔn tɛkrɛma te sɛ akofena a ɛyɛ nnam.
5Ao Onyankopɔn, woyɛ kɛseɛ wɔ ɔsorosoro hɔ;
ma wʼanimuonyam nkata asase nyinaa so.
6Wɔtrɛɛ asau mu de sum me nan afidie,
Wɔtuu amena wɔ me kwan mu,
7Ao Onyankopɔn, mʼakoma agyina pintinn,
8Me kra nyane!
Sankuo ne bɛnta, monnyane!
Me nso mɛnyane anɔpahema.
9Ao Awurade, mɛyi wo ayɛ wɔ amanaman no mu;
mɛto wo ho dwom wɔ nnipa mu.
10Wo dɔ yɛ kɛseɛ na ɛduru ɔsorosoro;
wo nokorɛ kɔka ewiem.
11Ao Onyankopɔn, woyɛ kɛseɛ wɔ ɔsorosoro hɔ;
ASCB : Nnwom 57